पूजामा रक्षा सूत्र किन प्रयोग भएको हो ? - NepalKhoj
पूजामा रक्षा सूत्र किन प्रयोग भएको हो ?
नेपालखोज २०७८ साउन ६ गते ५:०८
हामी बाल्या वस्थादेखि नै देख्दै आएका छौं कि पूजा र धार्मिक कार्यको क्रममा, सुरक्षा धागो हातमा बाँधिएको हुन्छ । जसको शाब्दिक अर्थ सबै भन्दा माथि हुन्छ । यसलाई नाडीमा बाँधेको कारण यसलाई ’कलावा’ भनेर पनि चिनिन्छ । पुराणका अनुसार यसको वैदिक नाम मणिबन्ध हो । सनातन परम्परा अनुसार यो यज्ञ पछि नाडीमा लगाइन्छ । रक्षा सूत्र लगाउने धेरै नियमहरू छन् ।
रक्षा सूत्र लगाउने नियम
रक्षा सूत्र पुरुष र अविवाहित केटीहरूले दाहिने हातमा लगाउनु पर्दछ । विवाहित महिलाहरूले बाँया हातमा रक्षा सूत्र लगाउनु पर्छ । नयाँ सुरक्षा धागा लगाए पछि, पुरानोलाई पीपलको रूखमुनि राख्नु पर्छ । रक्षा सूत्रलाई नारीमा लगाउँदा पाँचदेखि सात पटक घुमाउनु पर्नेछ । तपाईंले रक्षा सूत्र धारण गर्नु भएको कलाई, यसको मुट्ठी बाँधिएको हुनु पर्दछ र अर्को हात टाउकोमा हुनु पर्दछ ।
साउन महिनामा रुद्राभिषेकको विशेषता
भगवान शिवलाई प्रसन्न पार्ने उत्तम उपाय रुद्राभिषेक हो । रुद्राभिषेकको अर्थ रुद्र अर्थात भगवान् शिवको स्थापना हो । शिवरात्रिमा रूद्राभिषेक, प्रदोष र साउनको विशेष महत्व छ । साउन महिनामा शिव भक्तहरूले शिव मन्दिरहरूमा रुद्राभिषेक गर्छन् । रुद्राभिषेक घरैमा पनि गर्न सकिन्छ । साउन महिनामा रुद्राभिषेक गर्दा सबै देवीदेवताहरूलाई अभिषेक गर्ने फल दिन्छ । रुद्राभिषेकसँग तपाईका सबै इच्छाहरू पूरा गर्ने शक्ति हुन्छ ।
१. दूध – घरको वातावरण रमाईलो र शुद्ध बनाउनका लागि, रुद्राभिषेक दूधको साथ गर्नु पर्छ ।
२. दही – पारिवारिक कलह, झगडा र नोक्सानबाट बच्न, दहीसहित रुद्राभिषेक गर्नुहोस् ।
३. मह – रुद्राभिषेक भगवान् शिवबाट ज्ञान लिन महको साथ गर्नुपर्छ ।
४. घ्यू – रुद्राभिषेक घ्यसँग गर्नु पर्दछ । यसले व्यापार वा व्यवसायमा आउने अवरोधहरुलाई हटाउन मद्दत गर्दछ ।
५. तिलक – रुद्राभिषेकमा तिलक प्रयोग गर्दा शत्रुहरुलाई नष्ट गर्न मद्दत गर्दछ ।
६. गंगा जल – कुंडलीमा व्याप्त ग्रह दोषहरू हटाउन गंगा जलले रुद्राभिषेक गर्नुपर्छ ।